Digniinta Blizzard ayaa loo dhajiyay dhammaan Siouxland Arbacadii baraf, xoog, dabayl iyo qabow dara | KWIT
Somali News 12.23.2020
Baabuurtu waa inay dhigtaan dhinaca tirada lambarrada tirada yar ee wadada laga bilaabo Arbacada, Diseembar 23. Waa in loo raraa dhinaca dhinaca wadada laga bilaabo Khamiista, Diseembar 24 markay tahay 7:00 a.m.
Haddii ay jirto calaamadda Baarkinka Baabuurta ee wadada, gawaarida looma oggola inay dhigtaan halkaas waana in loo raraa meel kale.
15 qof oo kale oo ku nool Iowa ayaa u dhintey cudurka loo yaqaan 'coronavirus' waxaana jirey ku dhowaad 2,000 oo cudur oo la xaqiijiyey muddo 24 saac gudahood ah.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa dadka ku boorrinaya in ay qaadaan taxaddarrada coronavirus inta lagu jiro fasaxyada, iyagoo sheegay in isu imaatinyadu ay ku hanjabayaan in ay dib u dhigayaan guushii ugu dambeysay ee gobolka ee gaabiska infekshannada.
Bishii Diseembar waxaa lagu calaamadeeyay war wanaagsan, iyada oo kiisas cusub ay sii socdaan oo ay sii yaraanayaan ayna imanayaan tallaallada COVID-19. Waaxda Caafimaadka ayaa soo warisay in ka badan 500 oo qof oo la tijaabiyay oo aysan jirin dhimasho cusub. Si kastaba ha noqotee, gobolka bishan ayaa wali ka warbixiyay heerka ugu sareeya ee qaran ee dhimashada qofkiiba.
Nebraska ayaa laga yaabaa inay si dhakhso leh u dabciso xayiraadaha ay ku kala fogaynayso bulshada mar labaad maxaa yeelay tirada dadka la seexiyay coronavirus-ka ayaa sii waday inay hoos u dhacdo.
Ka dib markii la soo sheegey 238 dhimasho sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19, gobolka Iowa la
By Halima Osman • Dec 18, 2020
Ka dib markii la soo sheegey 238 dhimasho sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19, gobolka Iowa lama diiwaan gelin dhimasho cusub 24-saac gudahood.
Waxaa jiray 1,900 kiis oo cusub maaddaama faafitaanka fayrasku uu ku sii yaraanayo gobolka.
Waxaa jiray 62 kiis oo cusub oo ka dhacay Degmada Woodbury iyo sagaal ka tirsan Degmada Dakota.